Indaba ezimnandi zeGadra – Grocott's Mail
You are at:Home»Uncategorized»Indaba ezimnandi zeGadra
Indaba ezimnandi zeGadra
By _Gr0cCc0Tts_ May 16, 2013 No Comments2 Mins Read
“Imibutho yasekuhlaleni engekho phantsi kukarhulument nengenzi ngeniso (Non-Governmental Organizations) ibalulekile kwelixesha lenkululeko kwaye iyadingeka ukwakha uqoqosho lwesixeko saseRhini,” lawo ibengamazwi kaDiana Hornby, isithethi sembeko kumsitho wohlaziyo lowona mbutho mdlala ozimeleyo eRhini.
Kulonyaka iGrahamstown Area Distress Relief Association (iGadra ngamafuphi) neliziko leengcebiso nejongene nezidingo zasekuhlaleni ibibhiyozela iminyaka emashumi mahlanu (50) yasekwayo ngokuphucula indlela ejongeka ngayo ze yanesidlo sakusasa nalapho bekubanjwe umhlangano eKingswood Wyvern ngoLwesibini kusasa.
Lomhlangano ubuzinyaswe ngabantu abebemele amashishini, izikolo, amagosa aseburhulumenteni, nemibutho ezimeleyo ukuzakuzivela okwenziwe ngumbutho weGadra kunye nezinto abasaceba ukuzenza.
Ezona projekthi zisentliziyweni yalombutho ziquka ukuxhaswa kwabantu abanoxinezelelo lwengqondo, ukuzinzisa iimeko zokuhlala kunye nokunceda abo bakhubazeke ngongaboni bebanika izakhono ezizakubanceda.
Umlawuli walombutho, uRoger Domingo, uthe wabela abebezimase lomsitho ngemvelaphi yalombutho ekwabongonga nabantu ukuba bazigqale izinto abanokuzenza ngabanyengabanye, beyimibutho kunye namashishini bexhasa indawo yabo.
Uthe wacacisa ngendlela abathe bakha ngayo ubudlelwane neminye imibutho ezimeleyo bejolise ikakhulu ekufumaneni imali kunye nokuphucula iimeko zokuhlala nokuzakuthi kuqhube ixesha elide.
“Sikholelwa kwiingxaki ezineziphumo ezibambekayo,” uhambise watsho uDomingo, “angekhe senza yonke into kodwa inkona into esinoyenza.” I-Gadra inceda malunga namakhulu amathathu (300) abantu baseRhini ngenyanga, kwaye uDomingo uthe wakhuthaza abantu ukuba bafake isandla apho bakwazi khona.
“Sonke sinayo indima esinokuyidlala,” uhambise watsho. Isithethi sembeko, uHornby, nongumlawuli wemicimbi ejongene neemeko zasekuhlaleni eRhodes (Rhodes University’s Community Engagement), uthe wawisa intetho yakhe ehlwabisayo nalapho athe wagxininisa ekubalulekeni kwemibutho efana neGadra.
Uqhube ngelithi uphuhliso alujolisanga kwibala lwesikhumba okanye kubantu boluhlu oluthile, koko luquka wonke umntu. Uye wabongoza uluntu ke ngelithi maluncede lufake isandla ngokudlala noba yeyiphi indima luncedisana nalemibutho ukuphuhlisa izakhono zesixeko.
“Masenze unyaka ka2013 unyaka wohlaziyo lwesixeko sethu,” leyo ibeyintetho kaDomingo ekwatsho kananjalo ukuba wanelisekile yindlela ohambe ngayo lomsitho novule ithuba lokuphinda kwakho azise ngomsebenzi weGadra kwisixeko ngokubanzi.
Previous ArticleCrime: Vigilance is your best bet
Next Article This Grahamstown school can sing